ရေချိုးပေးပြီး အင်္ကျီချွတ်လဲပေးရင်တောင် ရှက်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားလေး Koe Koe အကြောင်းပြောလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့် - Cele Connections
ရေချိုးပေးပြီး အင်္ကျီချွတ်လဲပေးရင်တောင် ရှက်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားလေး Koe Koe အကြောင်းပြောလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့်
သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့်က ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ တော်တော်များများကို ရိုက်ကူးရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိလာသူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ပိုးအိအိခန့်က မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား အောင်သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် သားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးအိအိခန့်က လက်ရှိမှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ မလုပ်ကိုင်သေးပဲ သားလေးကိုသာ ဂရုစိုက်ထိန်းကျောင်းနေလျက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ပိုးအိအိခန့်က တဖြည်းဖြည်း အရွယ်ရောက်လာပြီး ရှက်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားလေးအကြောင်းကို “သူက ရှက်တတ်နေပြီ ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? သူ့မေမေရုပ်တော့သည်းခံကြည့်ပေး သားနဲ့ဆို မျက်နှာက ဖြီးနေတာ 😂😂😂” ဆိုပြီး Koe Koe ရဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြလာပါတယ်။
ပိုးအိအိခန့်ရဲ့သားလေး Koe Koe ကလည်း တစ်နေ့တစ်ခြား ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့ ရုပ်ချင်းပိုတူလာပြီး ချစ်စရာကောင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပိုးအိအိခန့််တို့ သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို သဘောကျကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရခြေိုးပေးပွီး အင်ျကြီခြှတျလဲပေးရငျတောငျ ရှကျတတျနပွေီဖွဈတဲ့ သားလေး Koe Koe အကွောငျးပွောလာတဲ့ ပိုးအိအိခနျ့
သရုပျဆောငျ ပိုးအိအိခနျ့က ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှေ တျောတျောမြားမြားကို ရိုကျကူးရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိလာသူတဈယောကျပါပဲ။ ပိုးအိအိခနျ့က မွနျမာ့လကျရှေးစငျ ဘောလုံးသမား အောငျသူနဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ သားလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပိုးအိအိခနျ့က လကျရှိမှာ အနုပညာလုပျငနျးတှေ မလုပျကိုငျသေးပဲ သားလေးကိုသာ ဂရုစိုကျထိနျးကြောငျးနလေကျြရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ပိုးအိအိခနျ့က တဖွညျးဖွညျး အရှယျရောကျလာပွီး ရှကျတတျနပွေီဖွဈတဲ့ သားလေးအကွောငျးကို “သူက ရှကျတတျနပွေီ ကဲဘယျလိုလုပျကွမလဲ? သူ့မမေရေုပျတော့သညျးခံကွညျ့ပေး
သားနဲ့ဆို မကျြနှာက ဖွီးနတော 😂😂😂” ဆိုပွီး Koe Koe ရဲ့ အကွောငျးလေးကို ပွောပွလာပါတယျ။
ပိုးအိအိခနျ့ရဲ့သားလေး Koe Koe ကလညျး တဈနတေ့ဈခွား ဖဖေေ၊ မမေနေဲ့ ရုပျခငျြးပိုတူလာပွီး ခဈြစရာကောငျးလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပိုးအိအိခနျ့တို့ သားအမိနှဈယောကျရဲ့ ပုံရိပျတှကေို သဘောကကြွမယျလို့ ထငျပါတယျ။
ကျောင်းနေအရွယ် နွမ်းပါးတဲ့ကလေးငယ်တွေကို ကျောင်းသုံးကျောပိုးအိတ်တွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ Sinon Loresca